Ebe mmemme ekeresimesi na Kildare - IntoKildare
Maynooth, Naas, Leixlip, Nri na Ṅụọ, Christmas
O siri ike ikwere na oge eruola ọzọ ịmalite iche echiche maka mmemme mmemme nke afọ a! Onwere onye tinyere gi onye isi oru mmemme ekeresimesi afo a? Atụla egwu, n'ime Kildare enyochala Kildare elu na ala maka oghere kachasị mma iji nọrọ na nnọkọ oriri na ọṅụṅụ ruo afọ! Site na ihe omume n'èzí ruo oriri abalị, enwere ihe maka onye ọ bụla.
Akwukwo nke Carton House kesara (@artarthouse)
Ụlọ Carton nwere ihe niile ịchọrọ maka ekeresimesi gị n'afọ a. Ma ị na-eme atụmatụ na nnọkọ mmekọrịta chiri anya ma ọ bụ ememe okomoko, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịhọrọ.
N'afọ a, Carton's Festive Gala Dinner na-anya isi nri anọ mara mma na gburugburu ebe obibi mara mma nke Carton Suite nke gụnyere ọnụ ụzọ nkeonwe, ebe nnabata na ebe obibi tupu arụ ọrụ.
Katọn Ụlọ Ememme Krismas
Biputere nke Glenroyal Hotel & Club Club (@glenroyal_hotel)
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Glenroyal nwere mmemme mmemme zuru oke iji mechie afọ! N'ime ụlọ ọrụ sara mbara yana ọnụ ụlọ ihi ụra mara mma, ọ na-eme maka ebe mmemme ekeresimesi zuru oke! Site na nri ehihie ekeresimesi na-atọ ụtọ yana ihe niile dị mma ruo tii ehihie abalị, Glenroyal Hotel echerela ya n'oge emume a niile. Soro ndị enyi, ezinụlọ ma ọ bụ ndị ọrụ ibe soro Glenroyal mee ekeresimesi a.
Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọọ 01 210 6246 ma ọ bụ email events@glenroyal.ie
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Glenroyal
Auld Shebeen (@theauldshebeenathy) biputere biputere.
Kwado obodo ekeresimesi a na abalị abalị ekeresimesi ekeresimesi na Athy. Site na mmanya mulled na mbata sochiri nri nri anọ dị ụtọ, kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịrịọ? Ọbụghị naanị na ha na-enye abalị ekeresimesi ekeresimesi na-agaghị echefu echefu mana ha na-ebupụta ahịa ahịa ekeresimesi mbụ nke Athy dị n'èzí ebe a na-eme egwuregwu n'akụkụ Grand Canal na Athy.
Otu K Club Ireland
Biputere K Club (@thekclubireland) kesara
Na -atọ ụtọ na ihe ịtụnanya ekeresimesi na K Club na mmemme gụnyere nri kacha mma, ọrụ na ntụrụndụ! Ndị otu K nwere ike ịnabata oriri n'etiti mmadụ 10 - 350. Ụlọ oriri na ọ offersụ offersụ a na -enye ọtụtụ ihe dị iche iche maka oriri ọ bụla. Yabụ maka mmemme ekeresimesi a na -agaghị echefu echefu kpọọ anyị oku ka anyị lekọta gị na ndị ọbịa gị anya.
Ogige Yard Hotel
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Court Yard na-enye ahụmịhe ekeresimesi pụrụ iche nke nwere ikuku pụrụ iche na ihe ndozi, oge niile ị na-enwe obi ụtọ nke ndị pianist bi n'oge menu mmemme anọ gị!
A ga-emebi gị maka nhọrọ na ntinye akwụkwọ ekeresimesi gị na Ụlọikpe Yard nke nwere ehihie na abalị na menu nri ọnụ.
Ụlọikpe Yard Christmas
Ịchọrọ iji ntughari mee mmemme ekeresimesi, kedu ihe ị ga -eji nọrọ ụbọchị ahụ n'asọmpi? Otu ụbọchị ị ga -apụ apụ, yikwasị uwe ma tinye nzọ egwuregwu ole na ole!
The Naas Racecourse Christmas Raceday na -enye ohere zuru oke iji soro ndị ọrụ ibe, ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi mee mmemme ezumike. Nwee obi ụtọ n'ehihie egwuregwu ịgba ọsọ ịchụ nta, ịkwakọba mmanya mgbe ị bịarutere yana nri oriri anọ dị na Panoramic Restaurant nke na-elele ọsọ ọsọ maka naanị € 55 kwa mmadụ.
Ụbọchị ezumike ekeresimesi na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Panoramic tinyekwara nnabata n'ọsọ, kaadị ịgba ọsọ, onye ndụmọdụ ga-eduga gị na kaadị ịgba ọsọ, ntụrụndụ na ọtụtụ ndị ọzọ!
Kuki nke Caragh - Abali oriri
Soro ndị ezinụlọ, ndị enyi ma ọ bụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ nọrọ n'abalị Isi nri nke Caragh oge emume a. Nwee obi ụtọ oriri Prosecco ma ọ bụ mmanya a na-ekpo ọkụ na-esote nri dị ụtọ, yana nhọrọ 2, 3 na 5 dị. Site n'egwu kwa Fraịde na Satọde n'ọnwa Disemba, ọ bụ ebe mara mma ime ekeresimesi a.
Ebe iri nri echekwara na nhọrọ nri mkpịsị aka dịkwa.
Kuki nke Caragh Christmas
ekeresimesi NchNhr NchNhr
Na-achọ ebe kacha chiri anya maka abalị ekeresimesi gị? Lee anya karịa nke Silken Thomas na Kildare Town! Site na menus usoro 2 na 3 mara mma gbawara na ọkacha mmasị mmemme n'etiti Kildare Town Square ọ bụ ebe zuru oke. Kedu ihe kpatara na ị gaghị eme otu abalị ma nọrọ n'otu n'ime ọnụ ụlọ ha mara mma tupu ha emefu n'echi ya na-eme ebe ịzụ ahịa ekeresimesi na Kildare Village.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị iche ekeresimesi a maka Christmas Party gị, gịnị ma ị ga-n'èzí na Redhills njem. Site na egwuregwu mkpado ịgba ụta ruo bọọlụ paintball ruo egwuregwu ọgụ Airsoft, enwere ọtụtụ ihe ọchị ị ga-enwe. Redhills Adventure bụ nhọrọ na-ewu ewu nke ukwuu maka ntinye akwụkwọ ụlọ ọrụ iji gbaa ndị otu egwuregwu ume yana mmemme niile dị n'èzí, ihe na-agaghị ahụ n'anya!
Ihe ịma aka na mmemme gụnyere:
Ihe ịma aka otu (Nhọrọ ma ọ bụrụ ihe ịma aka na-atọ ụtọ gụnyere Giant X&Os, Nkume Nkwụsị, Run Mat, Giant Puzzle, Foosball mmadụ, Ncheta Ncheta, Riddles Mental na ndị ọzọ.
Ebumnuche Site na Age - Zụlite nkà gị ma maa ndị ọrụ ibe gị aka na Target anyị site na ngwugwu Ages. Họrọ n'ime Ịtụfe Anyụike
Ihe omume dabere na mkpado Site na Paintball dị ala, mkpado archery ma ọ bụ adrenalin anyị kpalitere egwuregwu Airsoft Combat
Ihe omume n'èzí Redhills
N'ụlọ nkwari akụ Kildare House, a ga-emebi gị maka nhọrọ maka ebe mmemme ekeresimesi gị. Họrọ site na Gallops Bar & ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ Soulburger maka abalị ekeresimesi gị nke juputara na ihe ụtọ dị ụtọ yana menu vegan iji dabara ndị na-aga oriri na ọṅụṅụ!
MaynoothNaasLeixlipNri na ṄụọChristmas
Valentpo ụbọchị na-emekọ na County Kildare
5 Of The Best Picnic Spots Na Kildare
Jụọ mpaghara: Ebee ka ụlọ oriri na ọ Romanticụ Romanticụ kachasị dị na Kildare dị?
Votu: Kildare nri ụtụtụ kachasị mma 2019
Best Travel 'Splurges' Na Kildare
Ezi nri, ezigbo ụlọ ọrụ: nhọrọ nri Kildare dị ụtọ nke dabara na emume ezinụlọ ọ bụla
Ybọchị TV na-enwu gbaa na-aga site na Kildare